Taliska Booliska oo xaqiijiyay War ay Keydmedia Online Qortay | Keydmedia
Taliska Booliska oo xaqiijiyay War ay Keydmedia Online Qortay
Waxaa xabsiga la dhigay dhowr Askar iyo Saraakiil looga shakiyay inay fududeeyeen weerarka, taaso xaqiijineyso Xog gaar ah oo ay Keydmedia Online ka qortay Weerarkii Elite Hotel.
MUQDISHO, Soomaaliya - Jen. Candi Xasan (Xijaar) ayaa shaqadii ka joojiyay taliyihii booliska degmada Cabdicasiis, isagoo sidoo kale xaqiijiyay in askar loo xiray weerarkii Elite Hotel lagu qaadey Axadii lasoo dhaafay.
Warkan Keydmedia Online ayaa labo maalin kahor heshay, soona daabacday kahor inta uusan taliyaha bookiska u sheegin warbaahinta kale.
Shaqo joojinta taliyaha iyo askarta xarigooda ayaa yimid kadib markii la ogaadey inay u fududeeyeen gaarigii lagu qarxiyay hotel-ka oo ay la socdeen dableyda AlShabaab inuu kasoo gudbo baraha koontaroolka Degmada C/casiis iyadoo aan la baarin.
Xogta gaar ah oo Keydmedia Online heshay ayaa sheegaysay in Gaariga dableyda albaabka ku dufteen uu kasoo gudbay illaa 4 Koontarool [Checkpoint], iyadoo lasoo marsiiyay degmada Kaaraan iyo kuwa kale.
Waxaa Gaariga daba socotay Bajaaj ay saran yihiin rag hubeysan oo dharka Ciidanka xirnaa, iyadoo sidoo kale siday bambooyinka, waxayna kasoo galeen dhanka wadada Mariinada.
Waxaa durba dhashay shaki la xiriira in Saraakiil dowladda katirsan ay ku lug lahaayeen weerarka, iyagoo Al-Shabaab gacan ka siiyay sidii Gaariga iyo dableyda hubeysan looga soo gudbin lahaa Koontaroollada booliska.
Keydmedia Online ayaa baaritaan ku sameysay sida uu u dhacay weerarka Elite hotel, oo wadashaqeyn la'aan gudaha DF aysan Al-Shabaab fulin lahayn, maadaama goota amnigeeda uu adagyahay.
Weerarka Elite hotel ma uusan u suurtagaleen AlShabaab wada-shaqeyn la'aanta booliska.